राजनीति Archives - Naya Pusta
विवेकशील साझाका तीन सांसदले लिए निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र
Naya Pusta January 19, 2018 राजनीति
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सदस्यहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले उनीहरुलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् । कार्यक्रममा विवेकशील साझाका तीन सांसदले पनि प्रमाणपत्र लिएका छन् । विवेकशील साझाका तर्फबाट केन्द्रीय संयोजन समितिका सदस्य रमेश पौडेल,
लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने तयारीमा नेपाली काँग्रेस
Naya Pusta January 19, 2018 Special News, पदेश नम्बर ३ राजनीति, राजनीति
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग तालमेल गरेर जाने तयारी गरेको छ। पार्टी केन्द्रिय कार्य समितिको जारी बैठकमा नेताहरुले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुसँग तालमेल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका दलहरुसँग सहकार्य गरेर राष्ट्रिय सभाको
नेपाल-भारत सीमास्तम्भ बारे विवेकशील साझा पार्टीको चासो, निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति
काठमाडौँ । विवेकशील साझा पार्टी नेपालले नेपाल-भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीले सीमामा गरेको कार्यप्रगतिबारे देशवासीलाई जानकारी गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साझा पार्टीका प्रवक्ता रमेश पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै टोलीले हालसम्म ‘हराएका र क्षतिग्रस्त पिलर’ बारेको अवस्था, पिलरको निर्माण तथा मर्मतकार्यको सिलसिलामा सर्वेक्षण कार्यमा प्रयोग भएको प्रविधि, ऐतिहासिक तथ्य एवं नापनक्साका
राष्ट्रपति भण्डारीले अपराह्न ४ बजे प्रदेश प्रमुखलाई शपथ ग्रहण गराउँदै
Naya Pusta January 19, 2018 पदेश नम्बर ३, राजनीति
काठमाडौँ, ५ माघ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउने भएकी छन्। राष्ट्रपति निवासमा आज अपराह्न ४ बजे आयोजना हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिबाट नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले शपथ लिने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी केन्द्र तोक्नुका साथै प्रदेश प्रमुखको
२१ दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान, कुन दललाई के चिन्ह ? (सूची सहित)
Naya Pusta January 19, 2018 January 19, 2018 Special News, राजनीति
काठमाडौँ, ५ माघ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका २१ वटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ । आयोगले नेकपा एमालेलाई (सूर्य), नेपाली काँग्रेस (रुख), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) (गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा) संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (हातले समातेको मसाल) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई छाता
दुई रुखको बीचमा बेवारिसे शव भेटियो
Naya Pusta January 19, 2018 पदेश नम्बर ७, राजनीति
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–३, छेलामा बिहीबार बेवारिसे शव फेला परेको छ । दुई रुखको जराको बीचमा अन्दाजी ४५ वर्षीय पुरुषको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापाले बताए । शव स्थानीय मेलापात गएका महिलाले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । शव पूरै सडेकाले चिन्न नसकिने अवस्थामा
कांग्रेस बैठकमा आरोप-प्रत्यारोप, कसले कसलाई के के भने ?
Naya Pusta January 19, 2018 January 19, 2018 पदेश नम्बर ३, राजनीति
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबारे छलफल गर्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘निर्वाचनबारे बोल्नुस्, पराजयको समीक्षा पछि गरौँला’ भन्दै बैठकको सुरुवात गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकमा २९ केन्द्रीय सदस्यले पक्ष र विपक्षमा धारणा राखे । सभापति देउवाले
प्रदेश प्रमुख हटाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई
Naya Pusta January 18, 2018 राजनीति
काठमाडौं । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ। कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विवादित व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको भन्दै यसको समेत विरोध सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेसमेत नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेश प्रमुखमाथि पुर्नविचार गर्न सकिने
डोटीमा आन्दोलन उग्र बन्दै : १० राउण्ड हवाइ फायर
Naya Pusta January 18, 2018 Special News, पदेश नम्बर ७ राजनीति, राजनीति
डोटी । प्रदेश अस्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलनले उग्र रुप लिएको छ। बिहीबार दिउँसो दिपायलमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। दिपायलस्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय आगाडि आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा १० राउण्ड हवाइ फायर भएको छ। झडपमा परी तीन आन्दोलनकारी घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये एकजनाको अवस्था गम्भीर रहेको
जब केपी ओली र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी एकै प्लेनमा स्वदेश फर्किए
काठमाडौं । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थाइल्याण्ड पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज स्वदेश फिर्ता भएका छन्। रमाइलो संयोग यो छ की, पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह पनि ओली चढेकै प्लेनबाट स्वदेश फिर्ता भइन्। ओली र हिमानी थाइ एयरवेजको टीजी ३१३ कलसाइनको विमानबाट बिहिबार मध्यान्ह १२ः ४६ बजे त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण